Taylor Swift nyeredzi mune nyowani Apple Music shambadziro | IPhone nhau
Taylor Swift nyeredzi mune nyowani Apple Music shambadziro
Zvinoita sekunge chibvumirano chaTaylor Swift neApple Music chiri kuenda kure. Ichi chiziviso chizvino Ndiyo yechitatu nyeredzi muimbi Taylor Swift weApple Music. Zviripachena kuti mushure meiyo nhamba iyo makambani ese akaisa pamwechete zhizha rapfuura, Swift paakabuda semudziviriri wemapoka akazvimirira, Apple yakafunga kubheja pane mumwe wevaimbi vane mukurumbira pane aripo mimhanzi. Zviri kuwedzera pachena kuti gakava pakati pemapato maviri rakagadzirwa kubva pakutanga kusimudzira kambani kutsva mimhanzi sevhisi.
Tamba kunge pasina anotarisa @AppleMusic @thedarknesshttps://t.co/QfX9l0EXX7
- Taylor Swift (@ taylorswift13) Dai 12, 2016
Mune ino shambadziro yazvino tinogona kuona kuti kambani inoonekazve sei ichitarisa mune shambadziro nyowani iyo yainopinda basa remuimbi wechikwata cheRima achiimba rwiyo ndinotenda mune chinhu chinonzi rudo. Taylor anoshandisa For Iwe basa kutsvaga iyi rwiyo rutsva. Imwe neimwe nyowani Apple Music kushambadzira inosimbisa imwe Apple Music chimiro.
Parizvino hatizive kuti mangani mamwe maapuro akagadzirirwa Apple ramba uchisimudzira yako yekushambadzira sevhisi sevhisi naTaylor Swift, asi zvinoita sekunge pave nevazhinji vachiona kubudirira kuri kuitwa nesevhisheni iyi, iyo isingasviki gore rehupenyu yatosvika kune gumi nematanhatu vanyoreri.
Mukushambadzira kwekutanga Taylor Taylor ane nyeredzi muApple Music, taigona kuona kuti muimbi akashandisa sei iyo Gymflow playlist asati asvika pane yekutsika ndichiimba rwiyo rwe Drake Jumpman, izvo zvakaita kuti kutengesa kwerwiyo urwu kuwedzere ne400%. Mukushambadzira kwechipiri, takaona Swift achigadzirira kuenda kumafaro achiimba mazwi erwiyo rwaJimy Eat World The Middle, inoenderana neye 2001 album yegore Bleed American.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Taylor Swift nyeredzi mune nyowani Apple Music shambadziro
Apple inobvisa iyo Stefan Esser app (i0n1c) kubva kuApp Store yayo
Mumwe muzvinashawo muhombe anotengesa ake Apple share